8 Eyona Ndlela yokuHamba yokuHamba | Gcina A Isitimela
ekhaya > Ukuhamba eU.SA > 8 Eyona Ndlela yokuHamba yokuHamba
yi Emma Steel
Ukuhamba ngololiwe eTshayina, Uloliwe kuhambo Italy, Ukuhamba ngololiwe eRashiya, Travel Europe, Ukuhamba eU.SA
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 02/07/2021)
Kulo nyaka unethuba lokuphonononga imimangaliso yehlabathi njengoko imigaqo yokuhamba iqhubeka ukwenziwa intle. Iindawo zeholide ebezivaliwe ngaphambili zivulwa kancinci kancinci njengoko ilizwe liziqhelisa ukuhlala nalo bhubhane. Nazi ke 8 Eyona Ndlela yokuHamba yokuHamba yokuPhila 2021 ekufuneka uyithathele ingqalelo.
Zokuhamba Qeqesha yeyona ndlela ifanelekileyo yokusingqongileyo. Eli nqaku yabhalwa ukuba afunde Train Travel kwaye wenziwa ngu Gcina A Isitimela, Engambi Train Amatikiti Website In The World.
1. ICape Cod
Lo mmandla ukwimpuma yeMassachusetts kwaye yenye yezona ndawo zihanjiswe kakhulu kwi-East Coast. in 2021, isengaphezulu kweetshathi njengenye yeendawo zokuhamba zokuzalwa ezilungileyo. Kuninzi ekufuneka uyibonile kule ndawo kubandakanya esimhlophe amahle, zokulondoloza, izibane zembali, kunye nolonwabo oluninzi lwendalo. Ngelixa ukhenkethayo kule dolophu, kubalulekile ukuba ujonge indawo yokuhlala ekhuselekileyo. Ukuqeshisa ikhefu kwenza olona khetho lufanelekileyo xa kufikwa koku. Endaweni yokuhlala kwigumbi elincinci lehotele, Unokukhetha ukuhlala kwenye yeekapa ezininzi zeCape Cod iholide irente. Oku kuya kukunika imvakalelo efana nekhaya kuba uya kuba nokufikelela kwizinto ezinje ngekhitshi kunye negumbi lokuhlamba kunye nezixhobo ezinje Izixhobo zeHVAC. Oku kuluncedo ngakumbi xa ukuhamba neentsapho njengoko uya kuba nethuba lokwenza ukutya okucocekileyo kunye nokucoca ngexesha lokuhlala kwakho. Ukwengeza, kukho inqanaba elithile labucala kwirente yeholide xa kuthelekiswa nehotele.
2. Eyona Ndlela yokuHamba yokuHamba yokuPhila 2021: IAlaska
Ngaphandle kokwahlulwa ngokwendawo e-United States, I-Alaska yenye yezona ndawo zinomdla kwaye zinomtsalane zokundwendwela. Yeyona ndawo efanelekileyo yokuzalwa ikhefu lokuskiya nabantwana. Xa usiya kule ndawo yelizwe, uya kubona imikhenkce ekude, ukunyuka kweentaba, I-moose entle, 12ft-ubude iibhere, kunye neendawo ezininzi zonxweme. Phakathi kweendawo eziphezulu onokundwendwela eAlaska yiPaki yeSizwe yaseDenali, apho uza kufumana khona iibhere, iingcuka, kunye nemazi. Uyakufumana nethuba lokuhamba nge-Savage River njengoko ubuka amanzi azolileyo. Ukuba uyakuthanda ukuloba, Unokufumana ithuba lokundwendwela indawo yokuloba yaseAlaska, Homer intsingiselo yegama. Ngaphezu, ungashiya intlango uye e-Anchorage esona sixeko sikhulu eAlaska. Xa undwendwela iAlaska nosapho, Kuya kufuneka uqiniseke ukuba undwendwela i-Arctic Circle Day Tour ukusuka eFairbanks kunye neMatanuska Glacier yoSuku oluTyelelo. Ezi tyelelo zimbini ziya kugqiba iholide yakho yeAlaska.
3. IGrand Canyon eArizona
Ngaphandle kokufumana malunga nezigidi ezihlanu zeendwendwe minyaka le, IGrand Canyon isezona ndawo zibalaseleyo zokundwendwela 2021. It is eyona ndawo ithandwayo eUnited States kwaye ibonakala intle macala onke. Unokuhamba ngokunyuka kulo mmandla okanye uthathe ukukhwela ihelikopta ukonwabela ubume bembonakalo yomoya. Ungafikelela kwiiRim ezisemantla nezaseMazantsi ukusuka kumacala ajongene nomwonyo. Uninzi lwabantu lukhetha ukutyelela IPaki yeSizwe iGrand Canyon South Rim kuba ihlala ivulekile nasebusika. Ungathatha indlela yokuqhuba ngasese okanye usebenzise iibhasi zokuhamba ezikhenkethi kule ndawo ukonwabela umbono wentlango. KwiGrand Canyon, ungafumana ukubona ngaphezulu kwe- 447 iintlobo zeentaka ezikhoyo, Ngena enkampini ubusuku bonke entlango, kwaye uthathe inxaxheba kwizinto ezonwabisayo ezinjengeRafting. Kule ngingqi, amathuba amnandi awapheli!
ILucerne iya eLauterbrunnen Kunye noLoliwe
Geneve ukuya eLauterbrunnen Kunye noLoliwe
ILucerne eya kwi-Interlaken noLoliwe
I-Zurich ukuya kwi-Interlaken noLoliwe
4. Eyona Ndlela yokuHamba yokuzalwa 2021: Ipaki yeSizwe yeCrater Lake
Ime eOregon, ICrater Lake ihlala amashumi amahlanu anesithathu eekhilomitha. Eli chibi lihleli ngaphakathi kweNtaba iMazama eyathi yenziwa ngaphezulu 7000 kwiminyaka eyadlulayo ngokudubula. Inamanzi aluhlaza okwesibhakabhaka abonisa ukubonakala okumangalisayo okuya kukushiya umangalisiwe. Ubuhle beli chibi kukuba ungaya ngokuntywila malunga ne-2000ft ukuba uthanda olohlobo lokonwaba. Ukonwabela uhambo lwakho oluya kule ndawo, kufuneka uchithe iintsuku ezintathu uphonononge yonke imimangaliso elungiselelwe eli chibi.
ILyon eNice ngoLoliwe
EParis eNice ngoLoliwe
Cannes ukuya eParis ngoLoliwe
Cannes ukuya eLyon Ngololiwe
5. Ihlabathi leDisney
Okokugqibela kuluhlu yiDisney iipaki zemixholo kunye neeholide eOrlando. Le ndawo inomtsalane yenza eyona ndawo yokundwendwela yokuzalwa kwabantu abaxutywe ngokupheleleyo kwimisebenzi yabo yemihla ngemihla. Oku kuyinyani ngakumbi kubongikazi abaqinisekisiweyo abasandula ukugqiba I-NCLEX RN Uviwo kwaye bafuna iholide emnandi. Ngethamsanqa kubo, oko kwaqala unyaka, uninzi lweepaki luye lwavulwa kwaye zilungele ushishino. Ngenxa yokuba ithandwa kangakanani, le ndawo ihlala igcwele abantu ke kuya kufuneka ucwangcise utyelelo lwakho ngobulumko. Ukonwabela ukuhlala kwakho, Uya kufuneka uhlale malunga 6-7 iintsuku. Ezinye zezinto onomdla kuzoI-ld ijonge ukubona kubandakanya iPirates yeCaribbean, Inqwelo moya kaPeter Pan phakathi kwabanye.
6. Iindawo ezigqibeleleyo zokuHamba zokuzalwa 2021: IVenice e-Itali, Europe
Ifumaneka kumantla mpuma e-Itali, IVenice ngumbono wokubona abahambi. Yikomkhulu lommandla waseVeneto kwaye wenziwe 118 iziqithi ezincinci ezahlulwe yimijelo. Ezi ziqithi zidityaniswe ngaphezulu kwe 400 imizila. Akukho zindlela, Ithetha ukuba akukho zithuthi zinengxolo. Abantu bahamba ngephenyane kwimijelo, ukukhonza iindwendwe ngemiboniso ethile enomdla engabonakaliyo kwenye indawo. IVenice ithathwa njengesinye sezixeko ezizodwa emhlabeni, Ukuyifaka njengenye yeendawo eziphambili zabahambi kunye nabafoti 2021. Ngaphezu, IVenice yaziwa ngokuba yintando emangalisayo kwindalo yayo. IVenice ikwaxhoma uluhlu lwezona zininzi imizi amahle emhlabeni. Kungenxa yokunikezelwa kwayo okungekho ndlela, izakhiwo zeediliya ezinomtsalane, kunye nezinto zembali ezifumaneka kulo lonke ulwakhiwo.
EMilan ukuya eVenice ngoololiwe
UFlorence uya eVenice ngoLoliwe
I-Bologna eya eVenice ngoLoliwe
UTreviso uya eVenice ngoLoliwe
7. Indawo egqibeleleyo yokuHambo lokuzalwa 2021: Lake zamanzi, Rhashiya
Ukuba lelona lizwe likhulu emhlabeni, IRashiya inokunikela okuninzi kubandakanya iilwandle, ezintabeni, kunye nezakhiwo zembali. kunjalo, IChibi iBaikal lelona likhethekileyo kubahambi abaninzi nakwiifoto. Lelinye lamachibi amadala awaziwayo ehlabathini, ngeengxelo ezininzi ezibanga ukuba ingaphezulu kwe 25 Isigidi seminyaka ubudala. Ikwalona chibi linzulu ehlabathini, ukufikelela kubunzulu obuphezulu be 1642 mitha. Yintoni egqithisile? IBaikal lelona chibi likhulu lamanzi angenawo amanzi ehlabathini. Engaphezulu kwe 20% amanzi endalo ehlabathi ahlala kweli chibi. Ukujikeleza 5 iinyanga ngonyaka, ichibi lihlala ligqunywe ngumkhenkce. kunjalo, kusenokwenzeka ukubona nzulu njenge 40 Iimitha eziphantsi kwayo. Ukujikeleza 10 iinyanga ngonyaka, amanzi ayo ahlala phantsi kobushushu bomkhenkce 5 iqondo lobushushu. kunjalo, malunga nenyanga ka-Agasti, ubushushu bayo bunyukela phezulu 16 degrees Celsius, iyenza ukuba ibenokubhukuda ngokukhawuleza kunye nokudibanisa.
8. Udonga Olukhulu Lwe China
Nangona i-China ikhule yaba lilizwe elihambele phambili kwezobuchwephesha namhlanje, nangoku ayilahlekanga ngumtsalane kunye nomtsalane ebinayo ukuqala kwayo ukufunyanwa. Zininzi izinto ezintle kwaye eziyimfihlakalo malunga ne China, kodwa udonga olukhulu lubalaselisa lonke ukalisho kunye nenqanaba. Ngokwentetho ethandwayo yamaTshayina, "Akukho mntu onokuba ligorha lokwenene ngaphandle kokuba ebekwi-Great Wall". Yolula ngaphaya kobude be 6000 iikhilomitha, esi sikhumbuzo sikhulu lolunye uhlobo lwaso, kwaye kufuneka undwendwele wonke umhambi. Ukuphakama kwayo okuphakathi kukujikeleza 6 ukuba 8 mitha, kunjalo, idlula ngaphaya koku 16 Iimitha ukuphakama kwayo. Ibanzi ngokwaneleyo ukuba ingaphezulu 10 abahambahambayo bangahamba ngayo ecaleni kwelinye. Udonga lunezinto ezininzi ezinqatyisiweyo, kunjalo, ezona zindala zibhalwe malunga nenkulungwane ye-7 BC. I-Great Wall ngamava angena-ebomini ukuba akufuneki aphoswe ngayo nayiphi na indleko.
8 Eyona Ndlela yokuHamba yokuHamba yokuPhila 2021: isiphelo
Ngelixa usenokuba urhoxisile kwiholide yakho 2020 ngenxa yobhubhane, usenokuthatha olo hambo kulo nyaka. kunjalo, Qiniseka ukuba uthatha onke amanyathelo okonga kwifayile yakho Iindleko zothutho. Kuya kufuneka ujonge ubuncinci ukutyelela iCape Cod, IAlaska, iGrand Canyon, ICrater Lake, kunye neDisneyworld. Qalisa ukucwangcisa uhambo lwakho namhlanje ukuze wonwabele uhambo lwakho. Sikhetha ukuhamba ngololiwe kangangoko unakho ukuze ube nakho ukonwabela ezona mbono zibalaseleyo.
Apha Gcina A Isitimela, singavuya ukukunceda ucwangcise enye yezi 8 Eyona Ndlela yokuHamba yokuHamba yokuPhila 2021 ngololiwe.
Ngaba uyafuna ukufaka iposti yethu yebhlog "Iindawo ezi-8 ezigqibeleleyo zokuHamba kwi2021" kwindawo yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fxh%2Fbest-birthday-travel-ideas%2F - (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Ngaphakathi une link yethu ngenxa IsiNgesi emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml, kwaye ungatshintsha / fr ukuya / ru okanye / de kunye neelwimi ezininzi.
BestDestinations usuku lokuzalwa ikhampasi TravelDestinations TravelDestinations2021 TravelingDuringPandemic
U-Emma usebenza njengomcebisi neenkampani ezivela kumazwe ahlukeneyo. Umsebenzi wakhe ufuna ukuhamba rhoqo ukunxibelelana ngokuthe ngqo namaqabane akhe asebenza nawo, njengokuhamba ngumdlalo wakhe wokuzonwabisa kumenza umsebenzi ugqibelele. Uyakonwabela ukubhala amaxesha ngamaxesha ikakhulu amanqaku ahambelana nokuhamba, kodwa ke impilo kunye nendlela yokuphila. - Unako cofa apha ukuze Nxibelelana noRebecca
Le Festivals Winter Best EYurophu
Train Travel Holland, Uloliwe kuhambo Italy, Uloliwe Ukuhamba ngeLuxembourg, Uloliwe ohamba eScotland, Qeqesha uKhenketho e-UK, Travel Europe
Ukuhlela Travel wakho